Fetin'ny mpitsabo mpanampy 2020 | TIGERNU
Andro iraisam-pirenena ho an'ny mpitsabo mpanampy
TIGERNU dia nanolotra kitapo ho an'ny hopitaly teo an-toerana Iraisam-pirenena Fetin'ny mpitsabo mpanampy , 12faha Enga anie isika, mankasitraka fatratra ny dokotera sy ny mpitsabo mpanampy rehetra izay miezaka manatanteraka ny asa famonjena velona COVID-19 any Wuhan .ny faritra misy toe-javatra henjana indrindra.
Rehefa miresaka ny iraka ataon'ny orinasa iray isika dia zava-dehibe ny andraikitra .Na izany aza, tsy mora ny mampandeha ny iraka amin'ny lafiny rehetra. Ho an'ny TIGERNU, ny dingana voalohany tokony hataontsika dia ny famokarana ny vokatra avo lenta, manomboka amin'ny lamba ka hatramin'ny fitaovana, ny antsipiriany rehetra dinihinay mafy, satria io no vokatra ampiasain'ny olona amin'ny fiainana andavanandro matetika, tsy maintsy miantoka ny vokatra azontsika isika’manimba ny fahasalaman'izy ireo, ary manandrana ny tsara indrindra mba hanavao ny endrika, izay mety hitondra fahafaha-manao bebe kokoa.
Nahazo laza tsara momba ny kalitao sy ny endriny izahay, rehefa nahazo ny kitapo TIGERNU ny olona, ​​afaka mahita fahasamihafana miharihary izy ireo raha oharina amin'ny vokatra hafa, matoky izahay fa ny fanahy asa-tanana avy any Shina dia ho lovainina tsara amin'ny zanakay.
Fotoana fandefasana: Mey-15-2020